Askar ka tirsanaa ciidamada Itoobiya oo qaraxyo lagu dilay - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Askar ka tirsanaa ciidamada Itoobiya oo qaraxyo lagu dilay
Askar ka tirsanaa ciidamada Itoobiya oo qaraxyo lagu dilay
Faah faahinno dheeraad ah ayaa ayaa waxa ay ka soo baxayaan weeraro loo adeegsaday qaraxyo oo saacadihii la soo dhaafay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya lagula eegtay qeybo ka mid ah gobolka Baay ee koonfurta Somalia.
Qaraxyada oo ahaa noocda miinada ee maalaha fog-fog laga hagao ayaa waxaa lagu soo warramayaa in kolonyo ay la socdeen ciidamadaasi lagula bartilmaameedsaday inta u dhexeysa magaalooyinka Qansaxdheere iyo Bardaale ee gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxyadaasi ay ku dhinteen ku dhowaad shan askari, kuna dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo ka tirsan ciidamada wadanka Itoobiya ee qeybta ka ah howlgalka Midowga Afrika, AMISOM ee ka socda gudaha Soomaaliya.
Illaa iyo hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Baay oo ku aadan weeraradaasi loo adeegsaday qaraxyada.
Inta badan Al-Shabaab ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada ciidamada huwanta ee ku sugan gobollada Baay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya.